“ Axmed Madoobe Aqoonsi Ugama Baahna Dowladda Federaalka..” Cabdiraxmaan Faroole |
“ Axmed Madoobe Aqoonsi Ugama Baahna Dowladda Federaalka..” Cabdiraxmaan Faroole
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland, haatana ah Senator ka tirsan aqalka sare Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa warbaahinta isagoo ugu warramayey gudaha magaalada Garoowe ka hadlay xaalada cakiran ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan dhaq dhaqaaqyada ciidan ee gobolka Gedo.
Cabdiraxmaan Faroole ayaa marka hore eedeyn u jeediyey dowladda dhexe, wuxuuna sheegay inay ku xad-gudubtay nidaamka federaalka, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay faro-gelin ku heyso arrimaha gaarka ah ee dowlad goboleedyada, gaar ahaan Jubbaland.
Senator Faroole ayaa sidoo kale madaxda dowladda ka dalbaday inay si deg-deg ah ciidamada uga soo saaraan gobolka Gedo, si loo qaboojiyo xiisada ka jira gobolkaasi.
Dhinaca kale wuxuu carabka ku dhuftay in Axmed Madoobe uusan aqoonsi uga baahneyn dowladda, islamarkaana uu aqoonsan yahay Dastuurka Jubbaland.
“Axmed Madoobe aqoonsi ugama baahno Dowladda Federaalka, waxaa aqoonsan dastuurka Dowlad Goboleedka Jubbaland, DFS iyada ayaa faragelin ku heysa maamulkaas” ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole.
Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay sii xoogeysaneysay xiisada u dhexeysa ciidamada dowladda Soomaaliya ay geysay Gedo iyo kuwa Jubbaland oo dhowaan ku dagaalamay qeybo ka mid ah magaalada Beled-Xaawo ee gobolkaasi.